Tsara ve ny bisikileta fotoana? - Bisikileta
Tena > Bisikileta > Bisikileta amin'ny fotoana - valiny sy fanontaniana mahazatra
Bisikileta amin'ny fotoana - valiny sy fanontaniana mahazatra
Tsara ve ny bisikileta fotoana?
TimeNy frame dia malaza amin'ny kalitaon'ny fiara fitaterany. Izany dia ampahany amin'ny fampiasana kofehin'ny Vectran ao anaty layup, izay mandray ny fihoarana, ary avyFotoanaTeknolojia fork aktiv. Amin'ny $ 5,750, ny frameset 01 miaraka amin'ny fork Aktiv dia mitentina mihoatra ny fenobisikiletavidin'ny maodely 21.
Ny lanjany matetika no ifantohan'ny dinika momba ny bisikileta, ny singa ary ny fitaovam-pitobiana. Ho tsikaritrareo fa tsy manasongadina lanja be amin'ity fantsona ity aho, ary izany dia satria tsy dia misy dikany loatra noho ny eritreretinareo. Aza diso hevitra aho, misy antony marim-pototra hampiasana jiro jiro.
Hodinihintsika rehetra izy ireo ato amin'ity lahatsoratra ity. Na izany aza, raha manandrana mandatsaka ny lanjanao ianao mba hahazoana haingana kokoa, dia mety mitroka amin'ny hazo tsy mety ianao. Androany dia ho hitantsika ny sazy ara-potoana isaky ny kilao fanampiny ampianao amin'ny bisikileta na fitaovanao. ? Izahay dia mampitaha ireo sazy amin'ny fotoana ireo amin'ny endrika fanoherana bisikileta hafa.
Andao atomboka amin'ny fametrahana ny lanjany eo amin'ny sahan-kevitra. Rehefa mitaingina bisikilety any amin'ny havoana ianao dia tsy ny lanjan'ilay bisikileta fotsiny no entina. Izy ireo koa dia manosika ny vatanao, akanjo, kiraro, rano, sakafo, paompy, fantsom-pohy, ary izay entana mety hoentinao.
Ny lanjan'ny vatanao no ampahany lehibe amin'ity enta-mavesatra ity. matetika dia mihoatra ny 80% amin'ny totaliny. Ny bisikileta izay maivana 10% noho ny iray hafa dia mety hahatsapa tena manaitra rehefa manainga azy ianao, saingy matetika dia mampihena 1% fotsiny ny lanjanao ankapobeny, izay toa tsy dia manaitra loatra ankehitriny.
Ny fitsitsiana grama amin'ny bisikileta sy fitaovana matetika dia asa tena lafo vidy ihany koa. Ny kilao iray dia mety hidika ny fahasamihafana misy eo amin'ny lay $ 200 sy ny lay $ 600, ny vy vy $ 600 sy ny vatan-tsaka titanium $ 1,600, na ny bisikileta iray graissement $ 3,100 sy ny bisikileta vatosoa 6.200 $. Manaova bisikileta.
Ho fanampin'izay, ny vokatra maivana indraindray tsy dia mateza loatra. Mahita izany indrindra aho amin'ny ziper, lamba tsy tantera-drano, kasety aluminium (ary vatan-kazo), kodiarana sy sisiny. Eny ary, andao hojerentsika ny fiantraikan'ny lanja amin'ny hafainganana rehefa mandeha bisikileta.
Ny lalako mankany amin'ny tsy dia variana loatra amin'ny lanja dia nanomboka rehefa sendra tranokala antsoina hoe Bike Calculator aho izay, rehefa niditra ny masontsivana rehetra, dia afaka maminavina ny hafainganan'ny bisikileta amin'ny maodely matematika. Notsapaiko izany noho ny heriko, ny lanjan'ny vatako, ny lanjan'ny bisikileta ary ny lanjan'ireo fitaovana. Avy eo dia nanao profil madiodio 100 km tsotra aho izay lasa dimy kilometatra miakatra ary avy eo dimy kilometatra midina - in-10 - samy manana gradient 3,6%.
Ny halavan'ny totalin'ny haavon'ny toerana dia manodidina ny 1800 metatra. Nahazo vinavina mialoha aho amin'ny lanjan'ny entana efatra samy hafa mba hahafahako manisa ny ora isaky ny kilao fanampiny amin'ny diako. Voaporofo fa ny kilao dia tokony hanampy eo anelanelan'ny 76 sy 80 segondra hatramin'ny 100 kilometatra. .
Ary na dia nahenako ny heriko tamin'ny 30% aza na namboariko ny masontsivana ho an'ny mpitaingina kely kely kely herinaratra dia mbola roa minitra ihany ny kilao. Ny fiheverana ny lalako dia somary nahitana fiakarana kely, iray na roa minitra taorian'ny fiara efatra ka hatramin'ny dimy ora dia kely noho ny nantenaiko. Ka nanapa-kevitra ny hanao andrana mavesatra ahy manokana aho.
Nandeha ny bisikiletako aho, izay nisy metatra elektrika sy mpanamory habe roa lehibe, lalana 15,4 km niaraka tamin'ny haavon'ny 265 metatra. Nandeha an-tongotra 200 watt aho - vokatra izay fantatro fa azoko atao mandritra ny andro fitsapana iray manontolo.
Voaro tsara ny zotra, izay nampihena be ny fisakanan'ny rivotra. Namboarina hanahaka ny bisikileta iray andro eny amin'ny havoana, manodidina ny 1.800 metatra ny haavony mihoatra ny 100 km. Nanao hazakazaka fitsapana roa aho niaraka tamin'ny lanjan'ny entana telo samy hafa.
Ary izao ny valiko: Taorian'ny 40 minitra nitaingenako dia nahita fahasamihafana roa na telo minitra isaky ny am-baravarana aho rehefa nitafy ny lanja. Satria somary misintona ireo tarehimarika ireo, andao alao esorina amin'ny 100 km izy ireo hahitanao hoe mifanentana amin'ny inona ny finan'ny calculator an'ny bisikileta 78 segondra isaky ny kilao fanampiny. Ny fotoana fanampiny dia salan'isa iray minitra monja, nanolo-kevitra fa ny fahitako ny fiantraikan'ny lanja amin'ny hafainganam-pandehan'ny bisikileta dia diso kely.
Ny Bike Calculator dia tao anatin'ny 1.5 sy 4,5 minitra monja tamin'ny andrana andrana ivelany, izay heveriko fa mahavariana raha jerena ny mombamomba ny diako tsotra noforoniko dia ny momba ny halavirana sy ny haavon'ny haavo ihany.
Azoko antoka fa raha mandany fotoana manitsy ireo gradients aho dia hitombo hatrany ny marina. Nanandrana fitsapana lanja ivelany aho tamin'ny lalana fisaka. Hita fa tamin'ny 200 watt dia tsy hitako ny fahasamihafana lehibe teo amin'ny hafainganana raha nitondra 5 kg na 25 kg aho.
Very hevitra aho, nampidiriko tao amin'ny calculator bisikileta ary naminavina aho fa tsy tokony hiadana 10 segondra fotsiny isaky ny kilao fanampiny mihoatra ny 100 kilometatra. Heveriko fa izany no manazava ny antony nitovizan'ny hafainganam-pandehako - ny lanjako dia tsy maninona izay ao an-trano. Tsara izany, noho izany ny angon-drakitra momba ny angona sy ny matematika dia milaza fa tsy mety hampiadana anao loatra ny iray kilao.
Saingy misy tranga vitsivitsy izay heveriko fa tena ilaina tokoa ny mifantoka amin'ny bisikileta maivana sy maivana. Laharana voalohany: mihazakazaka tokoa ianao. Indraindray refesina amin'ny milimetatra ny fahasamihafana misy eo amin'ny fandresena sy ny faharesena.
Ny kilao latsaka noho izany dia manampy eto, ary ny tombony azo avy amin'ny fitsitsiana lanja dia vao mainka mampitombo ny halaviran'ny hazakazaka misy anao sy ny tendrombohitra misy anao. Laharana faharoa: hanatsarana ny fikirakirana sy ny fahatsapana ny bisikileta. Ny bisikileta mavesatra dia tsy mahatsapa ho snappy na mamaly rehefa mihazakazaka na mikorontana, izay mampihena ny aingam-panahy.
Izy ireo koa dia tsy azo ovaina loatra raha toa ka mavesatra loatra amin'ny valizinao rehetra izy ireo. 'Isa 3:. Raha efa hitanao ny lahatsoratro milaza ny fahasamihafana misy eo amin'ny bisikileta sy ny fitsidihana bisikileta, dia ho fantatrao fa ny bisikileta fitetezam-paritra dia henjana kokoa ary namboarina niaraka tamina singa maromaro namboarina manokana ho an'ny entana mavesatra.
Saingy izao ny fifanarahana: ny fitazonana ny lanjan'ireo entanao ho faran'izay kely indrindra dia midika hoe afaka mandeha am-pitokisana ianao saika bisikileta rehetra - fa tsy bisikileta fitsangantsanganana fotsiny. Laharana fahefatra: hanamora ny fampiakarana ny bisikiletanao. Betsaka ny fotoana ilainao hitondra ny bisikiletanao.
Ohatra, matetika aho no mitondra ny bisikiletako miakatra sy midina amin'ny làlana fitsangantsanganana sy lalan'ny bisikileta ary koa tohatra amin'ny tohin'ny trano, hotely ary gara. Ary ny laharana dimy: hanamora ny fanidinana. Ny kilao fanampiny vitsivitsy dia afaka manampy amin'ny seranam-piaramanidina. ? . ? .
Alao antoka fa maivana ny bisikiletanao mba tsy ho tratry ny sarany very saina ianao. Andao tonga amin'ireo lafin-javatra izay matetika manandanja kokoa noho ny lanja rehefa hafainganana amin'ny bisikileta. Bike Calculator dia maminavina fa ny kilao fanampiny dimy dia hidika 2,5% fotoana bebe kokoa amin'ny 100 km ahy, ny mombamomba ny môtô, ary ny 0.4% fotsiny amin'ny fotoana iray amin'ny mombamomba anao.
Azontsika atao ny mampitaha ireo isan-jato amin'ny fotoana ireo amin'ny endrika roa hafa fanoherana ny bisikileta: fanoherana ny fihodinana ary fanoherana ny aerodynamika. Raha toa ka ataoko eo amin'ny bisikiletako ny sasany amin'ireo kodiarana fitsangantsanganana miadana indrindra fa tsy ireo mihodina haingana indrindra, dia maharitra 12% ny lalan'ny be havoana amin'ity tranga ity. Ny fanoherana mihodina dia saika avo dimy heny noho ny manampy 5kg amin'ny bisikiletako ary 17 heny kokoa noho ny mombamomba azy ambany! Na izany aza, lehibe indrindra ireo isa ireo satria mampitahako ny kodiarana haingana indrindra amin'ny sasany miadana indrindra.
Fa na dia ampitahaintsika aza ny kodiarana akaikin'ny afovoan'ity lisitra ity, ny fanoherana mihodina dia mbola manan-danja kokoa noho ny 5kg fanampiny. Hampifandraisiko amin'ny CyclingAbout eto ambany ny lahatsoratra fanoherana mihodina. Nandritra ny andrana andrônamika ahy tamina velodrome fisaka dia hitako fa teo anelanelan'ny 6,4 sy 7,9% ny fotoana fandehanana fanampiny handrakofana 100 km rehefa mampiasa panniers fa tsy panniers.
Midika izany fa ny fanovana enta-mavesatra amin'ny diany fisaka dia mety 16 na 20 heny manan-danja kokoa noho ny manampy valizy fanampiny 5kg amin'ny bisikiletako. Azonao atao ny mahita ny lisitry ny tahiry aerodynamika ho an'ny mpandeha bisikileta amin'ity lahatsoratra ity etsy ambony. Ho famaranana, mazava ny angon-drakitra.
Ny lanjan'ilay bisikileta dia tsy dia manandanja loatra araka ny eritreretinao azy. Ny fitsapana any an-tsaha, miaraka amin'ireo isa avy amin'ireo maodelin'ny matematika, dia manome soso-kevitra fa ny kilao amin'ny lanjan'ny lanjan'ny bisikilety mihazakazaka 100km dia mety hanampy iray na roa minitra. Ary amin'ny velarana fisaka, ny kilao dia mety 10 na 20 segondra.
Eritrereto izany amin'ny manaraka fa lasa variana amin'ny lanjan'ny bisikileta sy ny fitaovana ianao. Angamba, mifototra amin'ity fampahalalana ity, afaka mamonjy $ 1.000 na $ 2000 ianao amin'ny alàlan'ny fisafidianana bisikileta vy fa tsy titanium. Na rehefa lany ny fitaovanao ultralight dia azonao atao ny manolo azy amin'ny zavatra maharitra kokoa.
Azonao atao koa ny manangona kidoro matory kokoa sy ahazoana aina kokoa ary hatoriana tsara kokoa. Raha mankafy ny atin'ny bisikileta nofidiko ianao dia miangavy anao mba hanohana an'ity fantsona ity ao Patreon, na amin'ny fomba hafa, raiso ny iray amin'ireo bokiko! Ny Toro-làlan'ny mpividy fitsangantsanganana sy bisikileta dia havaozina isan-taona - tsy andoavam-bola - ary omena anao izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny bisikileta alohan'ny ahafahanao mampitaha bisikileta 220 isan-karazany any amin'ny faran'ny boky.
Aiza no atao bisikileta?
Mbola manao bisikileta ve ny fotoana?
VOAVOATRATANY FRANTSAY.fotoanaFanatanjahan-tena sy mpifaninanaBisikiletamanana fifandraisana lalindalina anaty mifototra amin'ny kalitaon'ny fananganana tsy lavorary, ny fahamendrehana mitaingina ary ny teny fikasana.
Amin'izay fotoana izay dia mety efa naheno ianao fa mihamaro ny amerikana mandeha bisikileta. Mitombo ny varotra bisikileta. Nilaza ny indostrian'ny bisikileta fa nitombo 81 isan-jato ny varotra tamin'ny Mey.
Ity no volana faharoa mahitsy fa nihoatra ny $ 1 miliara ny varotra tamin'ny fividianana bisikileta, ka miteraka tsy fahampiana lehibe. Nandritra ny areti-mifindra dia nisy tanàna sasany nanidy ny arabeny mba hanomezana toerana malalaka kokoa an'ireo mpitaingina bisikileta sy hitazomana ny halaviran'ny fiaraha-monina. Tamin'ny lohataona sy fahavaratra taona 2020 dia niady mafy ireo fivarotana bisikileta hamaly ny fitomboan'ny fangatahana ataon'ireo bisikileta vaovao.
Nanomboka teo, ny mpivarotra dia afaka namorona ny tahiriny amin'ny endriny. Miaraka amin'ny bisikileta, môtô, moped ary scooter bebe kokoa eny an-dalana, hoy ny manam-pahaizana momba ny fitaterana, efa voatendry mialoha ny fotoana hanovana ny fivezivezena. Izany rehetra izany dia fantatra amin'ny anarana hoe micromobility.
Ahoana ny fomba hananana bisikileta bebe kokoa eny an-tsambo Mety hanova ny rafitry ny fitaterana any Etazonia ny làlana. Misy vondron'olona roa nanao bisikileta nandritra ny areti-mandringana, ireo izay mampiasa azy io hivezivezy na hivezivezy, ary ireo izay mampiasa izany ho an'ny tanjona ara-pahasalamana sy fialamboly. Shannon Ng, izay nisoratra anarana ho mpikambana ao amin'ny Citi Bike Members ao New York City tamin'ny volana septambra, dia latsaka tao anaty siny voalohany.
Ho ahy, ny fampiasana ny bisikileta amin'ny ankapobeny dia midika fotsiny hoe miala amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa. Tsy nandeha bisikileta talohan'ny areti-mandringana aho satria nampatahotra tokoa ny bisikileta tany New York City ary ny fiara dia hatraiza hatraiza ary nisoroka bisikileta aho na ohatrinona aza. Fa ny antony niovako izao dia satria vitsy ny fiara ary mahatsapa ho azo antoka kokoa amin'ny bisikileta aho.
Shannon koa dia maneho ny fitomboan'ny isan'ny vehivavy ao anatin'ny hetsika nentim-paharazana nanjakan'ny lehilahy. Any New York, ny vehivavy no mpampiasa betsaka indrindra amin'ny fandaharana fizarana bisikileta ao an-tanàna hatramin'ny nanombohany tamin'ny taona 2013. Antony iray lehibe mahatonga ny fahasamihafana eo amin'ny lahy sy ny vavy ny tahotra sy ny fiahiahiana ny fiarovana ny làlana, ankoatry ny fiarovana ny tenany manokana, fa ambonin'izany rehetra izany ny fiarovana ny lalana.
Ary noho izany, amin'ity tontolo ity izay tsy dia be loatra ny fivezivezena fiara, dia azo antoka fa manana ny fahafaha-mitarika vehivavy maro hitondra izany. Mipetraka any North Carolina i Cyrus Kolar. Tsy nandeha bisikileta talohan'ny areti-mandringana izy, fa ankehitriny kosa mandeha fito ora isan-kerinandro no mihidy ny gym.
Ary dia nividy lanjany aho, saingy tsy izany. Nahazo kardio be dia be tamin'ny basikety aho ary heveriko fa nitady fomba hafa hanaovana fanatanjahan-tena aho. Afaka nitondra vanim-potoana iray monja aho ary afaka nianjera.
Fa mieritreritra aho fa ny bisikileta fotsiny ho an'ny fahafinaretana ary ho an'ny fampiofanana fotsiny dia zavatra mety haharitra. Tsara vintana i Cyrus. Nahita bisikileta tamin'ny hazakazaka mijery ny Facebook Marketplace izy, saingy tsy ny rehetra no nanambina.
Tamin'ny fiandohan'ny areti-mandringana, ny bisikileta efa lehibe latsaky ny $ 200 dia nitondra fivarotana bisikileta mihoatra ny 203 isan-jato isan-taona. Ny fivarotana bisikileta an-tendrombohitra teo amin'ireo ankizy dia nitombo mihoatra ny 150 isan-jato. Ny bisikileta dia nitombo 107 isan-jato.
Ary tamin'ny volana Jona 2020, ny fangatahana dia nifindra tamin'ny bisikileta avo lenta izay mitentina $ 1000 mahery toa ny lalana, tendrombohitra, ary bisikileta elektrika VanMoof dia nitombo avo telo heny tamin'ny famokarana ho fiandrasana ny fitomboana, saingy tsy ampy izany; Niova be i Covid ho anay orinasa. Mandany vola be ny tinady. Ny fangatahana dia avo lavitra noho ny famokarana ankehitriny.
Hanome anao hevitra. Heveriko fa nanana enina enina heny mihoatra ny telovolana tamin'ny taona 2020 isika noho ny tamin'ny taona 2019. Niasa mafy kokoa noho ny teo amin'ny fiainantsika izahay.
Miezaka ny hanaraka zavatra fotsiny aho. Fantatrao fa efa ho 50 taona lasa izao ny Specialised. Ka tsy hoe tsy misy bisikilety fa miankina amin'ny bisikileta inona no tadiavinao.
Ny fotodrafitrasa mandeha bisikileta any Etazonia dia taraiky ny firenena eropeana sy ny firenena hafa izay efa tafiditra ao anaty rafitry ny fitaterana ny bisikileta. Ary tsy misy fiara intsony any Etazonia noho ny antony lehibe. Mbola io no fomba fitaterana mahazatra indrindra.
Ary raha ny tena izy, io dia misy akony lehibe koa amin'ny famatsiam-bola federaly sy ny politika federaly. Hatramin'ny 1991 dia saika ny volan'ny federaly dia niditra tamin'ny fanamboarana làlambe, fantatrao, fiara sy fitateram-bahoaka. Sambany tamin'ny 1991 no nahitantsika dolara vitsivitsy natokana ho an'ny fitaterana mavitrika, fanatsarana ny bisikileta sy bisikileta.
Nanomboka teo dia nahita famatsiam-bola bebe kokoa isika izay misy fiantraikany amin'ny fananganana fotodrafitrasa azo antoka kokoa ho an'ireo bisikileta. Ireo tanàna dia efa nanana famatsiam-bola ary mikasa ny hanitatra ny tambajotran-bisikiletany alohan'ny areti-mandringana hahafahan'izy ireo mihetsika haingana raha mitombo ny fahalianany amin'ny bisikileta. Seattle dia iray tamin'ireo tanàna ireo.
Izy io koa dia iray amin'ireo vondrom-piarahamonina voalohany nanambara fa mahatonga ny 20 amin'ny programa StayHealthy Streets 25 kilometatra maharitra izy, programa iray ahafahan'ny mponina any ivelany mitazona elanelam-piarahamonina. Tany am-piandohan'ny areti-mandringana dia nanapa-kevitra ny hampiasa ny sasany amin'ireo arabe manodidina anay izahay, ny Neighborhood Greenway, araka ny iantsoanay azy ireo, ho an'ny fidirana eo an-toerana ihany ary hanidy azy ireo amin'ny fiara mandalo ary hanokatra azy ireo amin'ireo mpandeha an-tongotra sy bisikileta. Ary izany dia nahafahan'ny olona nanao ny rariny teo amin'ny fiaraha-monina ary koa nahatratra tanjona lehibe.
Ary tsapanay faingana dia haingana fa misy olona maro eny an-dalambe an-tongotra sy bisikileta ary nanapa-kevitra ny hanao azy ireo maharitra izahay. Ary izahay izao dia miara-miasa amin'ireo vondrom-piarahamonina antenaina fa mivoaka amin'ny areti-mandringana mba hahitana izay tena dikan'izany mba haharetan'izany. Seattle dia tsy irery eto amin'izao tontolo izao; ny tanàna toa an'i Bogota sy Berlin koa dia nanitatra ny foto-drafitrasan'izy ireo amin'ny bisikileta; ny hafa toa an'i Milan, Londres ary Genève dia nanisy làlan-bisikileta miovaova hampisaraka ny mpitondra bisikileta sy ny fiara any Etazonia.
Ny tanàna sasany dia nahita fanarenana tsikelikely ary nizara bisikileta sy scooter vokatry ny fotodrafitrasa mandeha bisikileta vonjimaika. Saingy ny iray amin'ireo zavatra hitantsika amin'ny angon-drakitra dia ny faharetan'ny dia lavitra, izay heveriko fa tena mahaliana satria taorian'ny areti-mandringana, ny olona dia manao dia lavitra kokoa miaraka amin'ny micromobility iraisana ary mieritreritra aho fa mifandray akaiky amin'ny fitomboan'ny fotodrafitrasa izany. hanohanana azy toy ny lalana miadana. Ny fotodrafitrasa mandeha bisikileta any Etazonia dia miainga amin'ny làlan'ny bisikileta arovana, arofanina bisikileta arovana, lalan-kely bisikileta, lalan-kely sy lalan-kely eny an-dalambe, lalan'ny fifamoivoizana, arabe ary làlan'ny bisikileta milahatra.
Ireo singa ireo, ankoatry ny zavatra toy ny fambara amin'ny fifamoivoizana bisikileta, ananantsika avokoa ireo fitaovana ireo ary mila atambatra fotsiny izy ireo amin'ny toe-javatra mety sy amin'ny tontolo mety, mieritreritra aho fa mahay manangana karazana tambajotra ireo. Izahay dia tsy vonona hanao an'izany foana. Tamin'ny volana martsa 2020, ny Ivotoerana Fikarohana sy fampianarana momba ny fitaterana ao amin'ny Oniversiten'i Portland State dia nijery tanàna enina ary nampitaha ny varotra antsinjarany sy ny fandraisam-bahiny, ny karama ary ny tarehimarika momba ny asa alohan'ny sy aorian'ny nanampian'ny tanàna ireo fotodrafitrasa momba ny bisikileta 2013 fanadihadiana an'ny departemantan'ny fitaterana any New York sy ny departemantan'ny fitaterana any San Francisco 2014.
tsy fahampian-drano sy tahan'ny fo
Hitanay araka izany fa amin'ny toerana maro, ny làlan-bisikileta vaovao, ny fotodrafitrasa mpandeha an-tongotra vaovao any amin'ny distrikan'ny orinasa dia matetika mifandray amin'ny fampitomboana ny varotra sy ny asa ho an'ireo orinasa manamorona ireo lalantsara ireo. Ka amin'ny tranga sasany dia tsy misy ny vokany, saingy mahalana no ahitantsika ny vokany ratsy. Mbola olana lehibe ny famatsiam-bola amin'ireo fotodrafitrasa bisikileta.
Ny vola amin'ny fotodrafitrasa amin'ny bisikileta dia nentim-paharazana avy amin'ny hetra federaly sy petrol. Ny ankamaroan'ny vola dia miditra amin'ny fotodrafitrasa mandeha amin'ny fiara. Nilaza ny mpanohitra fa satria ny vola dia avy amin'ny hetra alaina, dia tokony hampiasaina hanatsarana fotodrafitrasa ho an'ny fiara fa tsy bisikileta.
Raha vantany vao azo antoka ny famatsiam-bola, ny dingana manaraka dia ny mamaritra ny toerana hametrahana ireo fotodrafitrasa. Ity fametrahana ity dia matetika mety manaraka ny saranga sy ny foko. Raha mijery ny tanàna any Etazonia ianao izao, dia matetika no tsy zaraina mitovy ny fotodrafitrasa bisikileta.
Ka misy fikarohana tsara any izay mampiseho fa farafaharatsiny any amin'ny tanàna lehibe kokoa, ny olona fotsy sy be vola dia mety hanana fidirana tsara kokoa amin'ny fotodrafitrasa amin'ny bisikileta. Ka tsy maintsy miova izany. Tokony hiasa tsara kokoa isika mba ho ara-drariny kokoa hanomezana fotodrafitrasa azo antoka sy azo antoka ho an'ny rehetra.
Na dia betsaka aza ny Amerikanina mandeha bisikileta mandritra ny areti-mandringana, dia tsy mazava kosa fa ny bisikileta dia hitazona ny lazany aorian'ny faran'ny fandrefesana ny fotoana fivezivezen'ny fiara rehetra amin'ny faritra iray mandritra ny fotoana maharitra. Nilatsaka izany metrika izany tamin'ny volana martsa 2020. Niakatra ny isan'ny tanàna rehefa nosokafana taorian'ny fanidiana hidin'i Covid, milaza fa manao dia lavitra kokoa ao anaty fiarany ny olona ary mety hiverina any amin'ny arabe feno fitohanana, ny ambaratonga dia tsy miakatra hatramin'ny ambaratonga voalohany niverina ny Pandemika.
Ho an'ireo tanàna izay efa nanome laharam-pahamehana ny fivezivezena sy ny lalan'ny mpandeha an-tongotra dia hitombo hatrany ny bisikileta ho toy ny fitaovam-pitaterana maharitra. Iray amin'ireo lamba firakotra volafotsy hitantsika ny fitomboan'ny filan'ny bisikileta sy ny fanaovana scooter ary ny fandehanana. Ny iray amin'ireo zavatra vinaninay mialoha dia ny fahitantsika fotodrafitrasa bebe kokoa natokana ho an'ny fandehanana an-tongotra sy bisikileta azo antoka, ary ny fampiasana scooter hanararaotana ny fivezivezena mavitrika ho fomba fitaterana.
Ka rehefa mijery ny toerana anaovantsika ireo fampiasam-bola amin'ny fotodrafitrasa isika, dia miankina betsaka amin'ny toerana ilana izany vola izany ary aiza no ilana fanamboaran-dàlana vaovao na arabe. Ary raha manao izay azontsika atao isika hampandehanana ireo arabe ireo arakaraka ny fandehanan'ny areti-mandringana ary tokony hifindra indray ny olona, ​​dia mila maka antoka ny olona fa afaka misafidy ny lalana mba tsy hiverina amin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana sy ny fahasosorana isika. miaraka amin'ny rafitry ny fitaterana anay. Ary azontsika atao ny mahazo antoka fa afaka mitety tanàna soa aman-tsara ny olona na manao ahoana na manao ahoana.
Inona avy ireo pedal Time?
'Fivarotana sary sybisikiletaambanin'nyTimemarika efa nilatsaka efa ho antsasaky ny tamin'ny taon-dasa, 'hoy ny fanazavana, nadika avy amin'ny teny frantsay. 'Izahay diaNa izany azamiatrika fandaniana lafo loatra. Tamin'ny taon-dasa Rossignol dia nanambara drafitra fanarenana izay nikatona tamin'ny fanidiana ny orinasan-tsoratany tao Voreppe, France, ka nahatonga ny fahaverezan'ny asa 29.
Ny pedal tsy misy clip dia azo zaraina ho sokajy roa. Kodiarana amin'ny bisikileta amin'ny lalana sy ny bisikilety an-tendrombohitra. Ary rehefa mifindra amin'ny pedal tsy misy clip ny olona dia manontany matetika izy ireo - Tokony hahazo hazakazaka bisikileta na bisikilety an-tendrombohitra ve aho? - Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hanazava ny fahasamihafana izahay ary hampiseho aminao ny dikan'izany.
Mba hahafahanao manapa-kevitra tsara indrindra amin'izay mety aminao - hanao andrana teknolojia avo lenta mihitsy aza izahay. (mihomehy) - Ndao, Olly.- Oh, (Beep) .- Alohan'ny hahamenatra antsika, andao aloha handeha amin'ny karazan-tongotra roa lehibe isika.- Mba hanaovana an'ity lahatsoratra ity dia niara-niasa tamin'i Look izahay satria mpisava lalana tao ny famolavolana pedal tsy misy clip.
Ny tiako holazaina dia ny nitondra ny pedal voalohany tamin'izy ireo tamin'ny 1984. Ary ny niandohan'izany, eny, izany no zava-misy mangatsiaka, raha ny marina dia tamin'ny teknolojia famatorana ski. - Marina tokoa izany.
Eny, na dia niara-niasa tamin'ny Look aza izahay, ny fampahalalana izay homenay anao dia mihatra amin'ny ankamaroan'ny marika amin'ny pedal. - Eny, noho izany dia pedal an-dalambe Look Keo2Max ity. Io no iray amin'ireo pedal pedal bisikileta mahazatra indrindra eto an-tany.
Ary ny iray amin'izy ireo dia milanja 252 grama fotsiny, ary ny savony, ao anatin'izany ny bolt, dia milanja 65 grama fotsiny - izy ireo. Ireo paty ireo dia miharihary fa ampifangaroina amin'ny pedal miaraka amina endrika telo-scales izay ataonao eo ambanin'ny kiraronao, vita amin'ny plastika mateza izy ireo. Mazava ho azy fa natao hisolo azy ireo rehefa tonta.
Saingy manana androm-piainana tsara izy ireo raha tsy mandeha eo amboniny ianao, amin'izay dia mihena be ny androm-piainana - Ity dia pedalin'ny bisikileta an-tendrombohitra Look X-Track Race raha ampitahaina. Raha ny fahitana azy dia kely kokoa noho ny pedal an-dalambe ny ivelan'ny pedal body. Ary ny iray amin'ireo dia milanja 363 grama.
Ny cleats dia vita amin'ny vy izy ireo ary kely kokoa ihany koa, ary milanja 55 grama isaky ny mpivady ao anatin'izany ny visy .- Ankoatry ny lanjany, ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny pedal amin'ny bisikilety sy ny pedal amin'ny bisikilety toy izao dia izao, araka izay azonao atao jereo, misy lafiny roa izy ireo, midika izany fa efa ho avo roa heny ny fotoana hanapahanao fotoana voalohany.- Misy ihany koa ny karazana pedal amin'ny bisikileta an-tendrombohitra izay natao ho an'ny enduro mitaingina lalana mba hitondra lavitra eny lavitra eny.
Iray ity, antsoina hoe X-Track En-Rage. Ary io dia mampiasa ny cleatas tena mitovy amin'ny pedal amin'ny bisikilety izay vao nasehonay anao ny hazakazaka X-Track, saingy manana vatana pedal betsaka kokoa izy io. - Ary noho izany faritra velarana lehibe kokoa ary noho izany sehatra lehibe kokoa hipetrahan'ny tongotrao, izay ahazoana aina kokoa rehefa manao ny dia lavitra kokoa ianao, fa ny maharatsy an'izany dia satria lehibe kokoa noho izy ireo, be dia be izy ireo ary mavesatra kokoa , ka ny iray amin'ireo dia milanja efa ho 200 grama mihoatra ny pedal amin'ny làlan'ny Look Keo2Max - Eny, ankehitriny mieritreritra aho fa efa tsy azontsika intsony ny fahasamihafana mavesatra sy ny fahasamihafana eo amin'ny maso, tonga ny fotoana hamelezana ny arabe hanaovana fitsapana. - Manaova hazakazaka vitsivitsy. (mozika faly) - andramo ny iray.
Io no clipping mahazatra ao amin'ilay fitsapana. - Mety ho toa tsotra izany, saingy ny fianjeran'ireo mpanelanelana GCM maro.- Eny, Matt Stevens (bip) .- Nifikitra mafy aho, tsy nankasitraka anao.
Ie, naharitra 20 minitra, fa ny tiako holazaina (Beep) - Amin'ity fitsapana tsotra ity dia mila manomboka amin'ny tongotra roa amin'ny gorodona fotsiny isika ary avy eo handrefy ny fotoana ilantsika ny fametahana ny tongotra roa araka ny tokony ho izy.
Mampiasa hodi-tongotra sy pedal amin'ny bisikileta i Danny raha hodi-bisikileta an-tendrombohitra kosa aho. Telo, roa, iray, mandehana - eny, eny! - Wow, tsara izany. Iray, mandehana.
Andramo ny laharana fahatelo avy amin'i Olly. Amin'ny telo, amin'ny roa, amin'ny iray, mandehana. (bip) 7.38 segondra. (mihomehy) Izany dia hampihena ny salanisan'ny sa? Angamba avelantsika handeha izy.
Hanandrana anao indray izahay. Aorian'ny fanandramana telo nesorina dia manandrana indray izahay. Ka mandehana telo, roa, iray.
Tena eo ve ianao? - Ie. - Eny, izany dia 2,92.
Tena nitovy tamin'ilay faharoa. - Miala tsiny? - Mitovy amin'izany, sa tsy izany? Latsaky ny telo segondra ho azy roa ihany. Tsy haiko, tsy maintsy nametaka ny anao ve ianao? - Eny ary, izay, (mimonomonona) fantatrao --- (mihomehy) Tokony ho nojerena.- Telo.
Roa. Iray. Mandehana.4.30. - Efatra? - Telo, roa, iray, mandeha.5.5. - Ry lehilahy.
Azonao lazaina amiko izao, nanindry ny pedal anao ve ianao? - Ie, nataoko izany, eny. - Okay azoko izany. Tsy nety ny teknika nataoko, ka diso izany. - Drei, roa, iray, mandehana.- Tsia, andao handeha.
Fotoana iray hafa.- 3.3.- Te hanandrana hafa aho satria tapaka ny iray.- Oh.
Iray, mandeha.- Ah, andao handeha. - 3.6.- Ry lehilahy.- Ny fandresena dia ahy.- Porofo mivaingana fa afaka mamonjy segondra lehibe isan'andro ianao amin'ny fividianana pedal amin'ny bisikileta an-tendrombohitra.
Ka ny valiny dia tena miharihary fa mora kokoa ny mametaka pedal amin'ny bisikilety an-tendrombohitra noho ny manao hazakazaka bisikileta amin'ny iray segondra na kely kokoa. Ireo valiny ireo dia manamafy ny zava-misy fa raha manana rafitra pedal mitovy isika dia azo antoka fa nokapohintsika i Olly - Okay. Eny, ny pedal amin'ny bisikileta an-tendrombohitra dia manana tombony amin'ny fanatsoahana indroa, fa ny pedal amin'ny lalana kosa dia mbola manana fifandraisana tsara miaraka amin'ny vavahady lehibe kokoa rehefa apetakao izy ireo.
Saingy heveriko fa tsy azo antoka ity fitsapana ity. Mila fitsapana hafa indray isika. Tokony horaisintsika amin'ny sehatra avo kokoa izany. - Ny iray azoko atao amin'ny ahy manokana, amin'ny fihetsika, handresy aho amin'ny manaraka. - Inona izany? - Fitsapana fotaka io. - Marina, ento aho amin'ny alalàn'ny ASO, Olly. - Eny, andrana roa, ny fitsapana fotaka dia atombok'io vatolampy etsy io.
Tsy maintsy manomboka ny bisikiletanao ianao, mamakivaky an'io fotaka feno fotaka io ary miakatra eo an-tampon'io banky io, mandalo ilay slide. Rehefa tonga eo an-tampon'ny top clip ianao ary hijanona ny timer raha efa tafiditra ao ny tongotrao roa. Hazakazaka izany.
Kiraro fotsy vaovao tsara tarehy be dia be misy anao any Dan - Izay ireo, eny - Mety ho maloto izy ireo - Mandehana Marker aloha ianao, milamina, mandeha. (Hira mahafinaritra) Teknolojia lehibe. Mandrosoa, Olly. - Oh (bip) - 15.33 segondra.
Saingy hitanao ny fihazakazahana? - Telo, roa, iray, mandehana. Ary lasa izy. - Oh! (Mozika faly) miditra aho. - Inona no nataoko? - 15.33 - 15.5 - Oh, akaiky izany.
Tsy azo antoka izany. Tsy ekena. Hazakazaka roa hafa - Roa hafa? (mimonomonona) - Eny ary, mandeha ianao - telo, roa, iray, mandeha - diky. (Mozika faly) (mimonomonona) - Andao handeha.
Efa ho 20 segondra. 20 segondra mahery, 20 Jona - Oh-- - Ny tiako holazaina dia tsy tokony hametraka izany amin'ny pedal isika. Fahadisoan'ny mpamily izany. - Azoko ny antony tiako holazaina fa apetrako amin'ny toerana tsara indrindra ilay pedal. - Dia izay.
Telo, roa, iray, mandehana.- Miditra aho.- Soa ihany fa haingana kokoa noho ny tamin'ny farany izy io. 14 segondra.- Ao anatin'ny telo, roa, iray, mandehana. (Mozika faly) Tongava Olly.- Ao, amin'ny, amin'ny.- 12.2 .- 12.2? - Inona no farany nataoko? - 14.- Tena? - Eny, okay, 12.3, handresy ny fotoananao.
Amin'ny telo, roa, iray, mandehana. Tsy azoko atao ny miditra ao anaty studs. Miditra aho. - 24.- Hodioviko amin'ny tehina eritreretiko ny lamba firakofako. - Very ny isa roa isika. - Ie, eny, na eo aza ny tsy fahaizako mihintsy amin'ny mandeha bisikileta amin'ny fotaka ary miarina haingana. (Beep) - Teknolojia lehibe.
Mandrosoa, Olly. - Afaka nametraka ny fotoana haingana indrindra aho. Saingy noho ny pedal no tena anton'izany, satria ny pedal amin'ny bisikileta an-tendrombohitra dia natao hiasa sy hanentsina ny molotrao, na dia tototry ny fotaka aza.
Na izany aza, kiraro bisikilety an-tendrombohitra ihany koa no natao handehanana. Ka mety ho voafatotra bebe kokoa ianao. Toy ny fialan-tsiny ihany ny antony nahalavoako fanindroany dia gaga indray fa izany rehetra izany dia ny kiraro an-dalambe sy ny pedal amin'ny bisikileta mihazakazaka no mihitsoka eny an-dalana fa tsy mivoaka eny ivelany.
Ka raha izany ihany no hataonao dia mijanona amin'ny tara. Saingy amin'ny fitomboan'ny fandrosoana amin'ny bisikileta, dia maro ny olona maniry hiditra any amin'ny tany. Raha izany no zava-misy aminao dia azo antoka fa izany no dinihina - eny, ary mety tsy izany fotsiny no atao amin'ny resaka fialamboly, matetika ny olona dia manana faritra ivelan'ny làlana eny an-dalana ary koa maninona? Fa misongadina ihany koa izany.
Fahasamihafana lehibe iray hafa. Ny kiraro bisikilety an-dàlana dia tonga mainty, fa ny fotsy kosa malaza be ary tsara tarehy nefa tsy manao. Aza tsara tarehy rehefa tototry ny fotaka toy ny --- Oh, tsy dia ratsy izy ireo.
Mivoaha ny safidiko, ho tsara toy ny vaovao ireo. (slo (w mozika jazz) Ka fitsapana telo ity - eny, eny, tsy fifaninanana hazakazaka izany, fanandramana tsotra fotsiny hanehoana fa mora kokoa ny mihazakazaka amin'ny kiraro bisikilety an-tendrombohitra noho ny amin'ny kiraro bisikilety eny an-dalana - Fantatray Fa maninona no tsy maintsy ataontsika? Ataovy eo imason'ny olona marobe izany? Eny, satria hoe mahatsikaiky ianao rehefa mandeha ao amin'ny paosin'ny bisikileta.
Toy ny Bambi amin'ny ranomandry. - Eny, mazava ho azy fa ho mora kokoa ny mandeha amin'ny kiraro bisikileta an-tendrombohitra satria mikatona ny lava hitanay raha any ivelany ny ahy.- Fantatro fa tsara izany .- Ary sarotra ny manitsaka azy ireo.
Ary mitabataba be izy ireo.- Toy ny kiraro mahazatra ihany, amin'izao fotoana izao dia mety manontany tena ianao hoe maninona ny olona iray no mandeha pedal manokana rehefa mora tsindriana ny pedal amin'ny bisikileta, mora kokoa ny manaisotra fotaka, ary ny mora kokoa ny mamaky trano? - Amin'ny ampahany, izany dia noho ianao nanangana fanandramana telo dia azonao antoka fa manao Ground ianao mba handresena fotsiny mba ho resy indray aho. Tsy marina? Na izany aza, misy antony vitsivitsy tokony handehanana eny amin'ny dal dal Pe manokana.
Mazava ho azy fa raha tsy izany dia tsy hamokatra azy ireo izy ireo. Voalohany, mety hisy tombony an-jorom-borona avy amin'ny sehatrarin'ny pedal-kiraro amin'ny resaka aerodynamika. Tokony ho namonjy zavatra iray na angamba roa ianao.
Faharoa, araka ny efa noresahintsika teo aloha, lehibe kokoa ny velaran-tany ka noho izany dia vitsy ny toerana mafana. Ary izany dia mety hahatsapa ho mahazo aina kely kokoa amin'ny dia lavitra. Ary fahatelo, mety ho famindrana herinaratra be io.
Fahombiazana bebe kokoa any. Ny tiako holazaina dia hoe, nitaingina be dia be teny an-dàlana niaraka tamin'ny pedal sy ny kiraro amoron-dalana aho. Nandeha bisikileta an-tendrombohitra be dia be aho, miaraka amina bisikileta an-tendrombohitra sy kiraro bisikileta an-tendrombohitra.
Azoko lazaina ve ny mahasamihafa azy? Mety ho notampenana fotsiny ny masoko, fa ho marginal. - Ie, heveriko fa tena afaka manavaka ny roa ihany koa aho. Manaiky ihany anefa aho.
Ary araka ny efa noresahintsika tetsy aloha, dia misy pedal amin'ny bisikileta enduro izay manana velarana midadasika kokoa ho an'ny faritry ny fifandraisana lehibe kokoa hahafahany mahazo aina kokoa, saingy manana fatiantoka mavesatra izy ireo amin'ireo pedal an-dalambe maivana indrindra. Ary fantatrao, ny KeoBlade, pedal hazavana tsy mampino. Ary raha ny tenako manokana, satria mandeha eny an-dalana ny ankamaroako dia aleoko manao pedal mora kokoa - Eny, izany hoe, raha te hampiasa pedal amin'ny bisikilety an-tendrombohitra amin'ny bisikileta ianao, dia aza avela hisy handresy lahatra anao fa tsy afaka.
Satria saika manao ny asany ihany koa izy ireo. Ary raha mankany amin'ny kianja filalaovan'ny ankizy ianao, ary raha te-hiakatra havoana miaraka amin'ny sakaizanao ianao dia mety handresy ianao - eny, teboka tsara - ka ampahafantaro anay izay pedal ampiasainao ao an-trano sy ny antony. Ary raha mampiasa bisikilety amin'ny lalana ianao ny pedal amin'ny bisikilety dia maninona no ataonao.
Avelao izy ireo amin'ny hevitra etsy ambany. - Eny, ary antenainay fa nahasoa anao ity lahatsoratra ity. Ary amin'ity fampahalalana ity dia azonao atao ny mifidy izay pedal mety indrindra aminao Ary raha izany dia omeo ankihibe izy.
Tsindrio ny Hisoratra anarana raha mila lahatsoratra bebe kokoa ianao ary hijery lahatsoratra iray hafa, ahoana ny momba ny bara mitete mifanohitra amin'ny bisikileta fisotroana azo avy tamin'ny andrana nandresy? - Angamba, eny.
Sarotra ve ny mitaingina bisikileta tri?
Bisikileta Triathlondia biby aerodinamika squirrelly. Izy ireo dia tsara amin'ny hafainganam-pandeha, fa ny endriny géometry,mitainginamidina amin'ny aerobars sy fizarana lanja (indrindra amin'ny boaty bento sy ny rafitra fanamafisam-peo vita amin'ny bar)bisikileta triindrindrasarotramitantana raha ampitahaina amin'ny làlanabisikileta.27. 2018.
Mendrika ve ny bisikileta TT?
Rehefa mampitaha ny hery antonony sy ara-dalàna ananan'ny atleta roa dia afaka milaza mazava tsara isika fa manana valiny amin'ny fanontaniantsika - miala amin'ny tsy fahampian'nybisikiletafahaiza-manao na rivotra mahery mifofofofo, enymanan-danjamitaingina aTT bisikiletaamin'ny hazakazaka tsy misy volavolan-dalàna ary na dia miasa ato amin'ny JT Multisport aza izahay amin'ny fahitana ny watt malalaka rehetra azo atao
Iza no manangana Rossignol?
Fa kosa, i Felt dia manampy an'i Rossi manamboatra miavakaBisikileta Rossignolny maodely, ny spéma, ny geometry ary ny singa dia samy mampiavaka azy avokoaRossignol.Rossignolnilaza taminay fa niara-niasa akaiky tamin'ny ekipa Felt izy ireo mba hamaritana ny marinaMANANGANAary teboka vidin'ny tsena tadiavin'i Rossi.
Niala tamin'ny fanaovana bisikileta an-tendrombohitra ve ianao?
Ho an'ny modely taona 2021, manana isikanijanona tsy nanao bisikileta an-tendrombohitraary ny sitrapotsymanaova tahiry na fizarana vaovao. Tato anatin'ny taona vitsy lasa,nahatsiaronifantoka manokana tamin'ny lalana fampisehoana sy ny triathlonbisikiletaizahay dia nanapa-kevitra ny hiverina amin'ny orinasa ifotony.
Inona no maha samy hafa ny pedal sy ny peddle?
Pedaldia anarana manondro an'ireo levers isan-karazany ampandehanan'ny tongotra.Peddledia verbe mifandraika amin'ny fivezivezena sy fivarotana entana.
SPD ve ny pedal amin'ny fotoana?
Timefanafihanaafaka mitsofokadia anSPD-deha bisikileta an-tendrombohitra, namboarina ho an'ny mitaingina any ivelany. nySPD-Ny famolavolana dia mifototra amin'ny vy kely, vy na vy izay apetaka amin'ny fialan-tsasatra kely amin'ny faladian'ny kiraro mba hamindrana ny kodiarana amin'ny tany.19.06.2019